Degdeg: Nacaybka Keenya ee Soomaalida oo laba kacleeyay – SOOMAALPEDİA
Posted on May 11, 2016 May 11, 2016 by SOOMAALPEDİA
Masuuliyiin ka tirsan dowlada Kenya ayaa jeediyay khudbado muujinaya siday u dhibsadeen una neceyb yihiin dadka Soomaaliyeed ee qaxooti ahaan u degan xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya.
Henry Rotich oo ah wasiirka maaliyada ee dowlada Kenya ayaa sheegay in dhibaato weyn ay ku qabaan dadka qaxooti ahaan u jooga xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay sidii dadkaasi dalkooda loogu celin lahaa.
Hadalkaasi wuxuu ka jeediyay munaasabad lagu xusayay 56 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaska ururka midowga Yurub.
Dhinaca kale, Xoghayaha Joogtadda ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Kenya, Karanja Kibicho ayaa sheegay inay Hay’addaha Sirdoonka iyo Ammaanka muddo dheer ogaayeen Khatarta Qaxootiga ku jira Xerooyinkaasi iyo inay Alshabaab ku dhex Milan yihiin Qaxootigaasi, waa sida uu hadalka u yiri.
Waxa uu ku dooday in weerarkii Alshabaab ay sannadkii 2013-kii ka geysteen Dhismihii Ganacasiga ee Westgate Mall in laga soo qorsheeyeen Xeradda Dhadhaab, waa sida uu hadalka u dhigay, mana jiraan warar madax bannaan oo xoojinaya Sheegashadiisa.
Dhawaan ayay aheyd markii Aamina Maxamed oo ah wasiirka arimaha dibada Kenya ay shaacisay iney doonayaan iney dalkooda ku laabtaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya, waxayna taasi muujineysaa iney naceyb u qabaan dadka Soomaaliyeed.